Madaxweyne Rayaale Oo Caddeeyay Inuu Maraykanka Ku Casuumay Saldhig Milatari Oo Uu Ka Samaysto Berbera | WWW.SOMALILAND.NO
Madaxweyne Rayaale Oo Caddeeyay Inuu Maraykanka Ku Casuumay Saldhig Milatari Oo Uu Ka Samaysto Berbera
Posted on Maarso 15, 2008 by Abdirisak Fadal
Hargeysa (sl.no) – Madaxweynaha Somaliland Md. Daahir Rayaale Kaahin, ayaa markii u horaysay si rasmi ah u caddeeyay inuu Maraykanka ku martiqaaday inuu saldhig milatari ka samaysto magaalada Dekedda ah ee Berbera, oo uu sheegay inuu hore ugu lahaan jiray saldhig.
Madaxweyne Rayaale, waxa uu sheegay inuu soo dhawaynayo dalka Maraykanka, isaga oo u rajeeyay in doorashada Maraykanku ku dhammaato guul.
“Inkasta oo aanu gaadhnay ammaan iyo nabadgelyo wadankayaga ka jirtay muddo dheer, haddana weli lanama aqoonsan, arrintaana dhibaa naga soo gaadhay. Ma helno dhaqaalaha deeq bixiyayaasha caalamka sida wadamada kale ee Afrikaanka ah. Waxaanu dagaal kula jirnaa argagixisada, waxaanan leenahay ilo dhaqaale oo badan oo weli dihin. Waxaanan ku martiqaadaynaa maalgeliyayaasha caalamiga ah inay maalgashadaan wadankan, iyagoon ka waabanayn.” Ayuu yidhi Madaxweyne Daahir Rayaale Kaahin, sida lagu baahiyay cadadkii Shalay soo baxay ee Wargeyska Sub Sahara Informer oo ka soo baxa magaalada Addis Ababa, Itoobiya….
Madaxweyne Rayaale wuxuu sheegay in dawladda Maraykanku balan qaaday inay wadamada Midowga Afrika ku dhiiri gelin doonto aqoonsiga Somaliland, waxaanu xusay in socdaalkii Somaliland ee Ms. Jendayi Frazer ee bishii hore uu ahaa fulinta balan ay ku soo wada galleen dalka Maraykanka, xilligii uu Washington tagay iyo isaga iyo wefti uu hoggaaminayaa horaantii sannadkan.
Madaxweyne Rayaale wuxuu balan qaaday inuu si adag uga shaqayn doono sidii doorashooyinka Somaliland ee soo socdaa u noqon lahaayeen kuwo Dimuqraadi ah. Madaxweynaha oo ka jawaabayay su’aal nuxurkeedu ahaa in la furi doono ururada siyaasiga ah, waxa uu yidhi, “Weli Somaliland wax ka bedel kumay samayn Distoorkeeda, sidaas daraadeed maaha sharci. Murashixiinta la filayaa waa inay ku biiraan mid ka mid ah saddexda xisbi ee shaqaynaya si ay u tartamaan cabashadana isaga daayaan.”
Madaxweynuhu waxa uu dawladda Itoobiya ku ammaanay sida ay uga shaqaynayso wanaajinta xidhiidhka ay la leedahay Somaliland, waxaanu muujiyay inuu ku rajo weynyahay in Itoobiya noqoto wadanka u horeeya ee Afrikaan ah ee aqoonsada Somaliland.
Madaxweyne Rayaale oo ka hadlaya martiqaadka uu Maraykanka u fidiyay ee ah inuu saldhig milatari ka samaysto magaalada Berbera, waxa uu yidhi, “Noloshu way is bedeshaa. Hore waxa loo odhan jiray jid kasta oo aad martaa wuxuu ku geeyaa Talyaaniga, laakiin hadda beryahan dambe jid kastaa wuxuu ku gaynayaa Maraykanka. Sidaas daraadeed waanu soo dhawaynaynaa Maraykanka oo waxaanu ku casuunay inuu dib uga samaysto saldhig Milatari magaalada Xeebta ah ee Berbera, sidii uu wakhti hore ugu lahaan jiray.”
Madaxweyne Rayaale oo ka hadlayay doorashada Maraykanka ee qabsoomi doonta bisha November ee sannadkan, wuxuu yidhi, “Waxaanu u rajaynaynaa oo keliya doorasho guul ah, waxaanan rajaynaynaa inay tusaale u noqdaan doorashooyinka dimuqraadiga ah ee dunida.”
Mar uu ka hadlayay xidhiidhka wadamada Yurub iyo Somaliland, waxa uu tusaale u soo qaatay dawladda Talyaaniga, waxaanu yidhi, “Dawladda Talyaanigu dareen xun kama qabto qaddiyadda Somaliland, sida aanu ku wada hadalnay ergayga talyaaniga u qaabilsan Afrika, markii aan safarka ku tagay talyaaniga sannadkii hore.”
« “OGEYSIIS” KONTIINAR LOO RARAYO DALKII MA FILAYO WASIIRKA AMA AGAASIMAHA GUUD EE MAALIYADU INAY ODHAN KARAAN SAYLAC CASHUURTA HALAGA DHIMO,TAAS HADAY YIDHAAHDAANA WAA MID AAN SHARCIGA WAAFAQSANAYN »